Manomboka sahady koa ny antsojay atao amin’ny mpanao gazety, raha ny akom-baovao taorian’ny fisavana ny tranon’ilay mpandraharaha Mbola Rajaonah.
Mpanao gazety sahy mitsikera an-dRajoelina ry zalahy ireto, raha ny voalaza. Raha tsiahivina dia avy amin’ny vondrona Mapar ny minisitry ny atitany sy ny praiminisitra.
Nanam-pikasana ny hametraka fitarainana teny anivon’ny manam-pahefana manoloana ireo tsy fihetezan-javatra niseho tamin’ny fifidianana ny kandida ho filoham-pirenena, Jean Ravelonarivo. Nanambara kosa izy omaly fa mba ho fitandroana ny filaminana dia naleony najanona izany.
Efa mitady izay ho talen’ny fampielezan-kevitr’izy ireo fatratra ankehitriny ny antoko politika madio na APM. Anisan’ny sivana apetrak’izy ireo moa ny hoe madio eo amin’ny sehatra politika misy azy ilay tale horaisina.